I-LAB-iLebhu yoBugcisa kunye nebhedi kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
I-LAB-iLebhu yoBugcisa kunye nebhedi kunye nesidlo sakusasa
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSilvia
Indawo ekhethekileyo yokwenyani ebekwe kumbindi weSalento, amanyathelo ambalwa ukusuka kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide eCastro, eSanta Maria di Leuca, Otranto. Indawo yokutyela yamkelekile kwaye iqaqambile, inegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala elikhulu elinebhedi yesofa kuzo naziphi na iindwendwe ezongezelelweyo, kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kwigadi ekwithafa ukonwabela iingokuhlwa zasehlotyeni ezishushu. NgeCapreoli 195
Indawo yokuhlala ehlaziywe ngokupheleleyo ngendlela eqhelekileyo, eyenye kunye nesimbo sokuyila, ekufikelelwa kuyo ngomnyango ekwabelwana ngawo kodwa izimele ngokupheleleyo kwindlu iphela, ibalulekile kwaye yamkelekile.
IPoggiardo yidolophu encinci enazo zonke izinto ezibalulekileyo zokuhlala okumnandi, iibhari, iivenkile, igrosari kunye neepizza zonke zikumgama ohamba lula, kunye nesikhululo sikaloliwe kunye nezikhululo zebhasi.
Ndivuleleke ngakumbi kulo naluphi na unxibelelwano, ukwabelana ngolwazi, njl. Iindwendwe zingaqhagamshelana nam ku-whatsapp, ngefowuni nange-imeyile
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Poggiardo